मिडवाइफ ट्याडको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा (एलिट्स प्रसूतिहरू)
मुख्य पृष्ठ >> प्रकृति >> मिडवाइफ ट्याड (एलिट्स प्रसूतिशैली)
मिडवाइफ ट्याड (एलिट्स प्रसूतिशैली)
यो एक आम मिडवाइफ टोड हो (Alytes प्रसूति रोग)। केही quirks संग स्पेनमा एक साधारण उभयचर।
यो एक सानो कथा छ। पोखरी सफा गर्दा हामीले भेट्टायौं। सबै जाडो पछि यो भर्ने बिना, यो भर्ने ट्यूबबाट बाहिर आयो र पानीमा खस्यो। एक निश्चित आकार को t tadpoles को अतिरिक्त। हामी भ्यागुताबाट बाहिर जान्छौं र ट्याडपोलहरूको हेरचाह गर्छौं, ती मध्ये adults वयस्कहरू पुगे।
मैले मेरा छोरीहरूलाई सिकाउन यस क्याप्चरको फाइदा लिएँ स्पेनको प्राकृतिक पार्कहरूमा उभ्याउने व्यक्तिको पहिचानका लागि कुञ्जी, डिकोटोमस गाइडको साथ प्रजातिहरू पहिचान गर्नुहोस्। यो ईकोलोजिकल ट्रान्जिसनका लागि मन्त्रालयले सिर्जना गरेको हो। तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यो लिङ्क र साथै मैले यसलाई ह्या hang्ग गर्छु यदि यो हरायो भने कि यी चीजहरू उपलब्ध हुन बन्द भए। तिनीहरूले मलाई माया गर्छन्।
स्पेनको प्राकृतिक पार्कहरूको एम्फीबियन कुञ्जीडाउनलोड गर्नुहोस्
र यहाँ केहि चीजहरूको नोटहरू छन् जुन मैले सुँडेकी ट्याडको बारेमा पत्ता लगाइरहेको थिएँ।
यो एक छ सानो थड, cm सेमी भन्दा कम। एक संग expect बर्षको आयु जुन धेरै थोरै विचार गर्दैछ जुन सामान्य टोड्स (बुफो बुफो) 30० बर्ष सम्म बाँच्न सक्छ।
पार्श्व आँखाहरू, सुनहरी आईरिस र ठाडो विद्यार्थीको साथ। मोटा उपस्थिति, मौसाको साथ ग्रेनाई छाला।
यो क्षेत्रीय होइन, पुरुषहरूले ढुocks्गा, क्रेभिसहरू, आदिमा आश्रय बाँड्न सक्छन्।। र तिनीहरू ध्वनिमा एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्।
यस फोटोमा हामी राम्रोसँग प्रशंसा गर्न सक्छौं तेस्रो पलक वा काल्पनिक झिल्ली.
यसलाई कसरी पहिचान गर्ने
पहिलो विधि कुञ्जीसँग छ जुन हामीले माथि छोड्‍यौं।
तिनीहरूलाई चिन्ने अर्को तरिका गाउनु हो। यो निकै अनौंठो, अकथनीय छ, पुरुषहरू द्वारा निर्मित सानो व्हिसल जस्तै, यो सानो उल्लू जस्तो देखिन्छ। अहिले सम्म, धेरै गर्मी रातहरू यो सुनेको भए पनि, मलाई थाहा भएन कि यो कुन जनावरको हो। मैले यसलाई रेकर्ड गर्न सके तपाईं यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ।
आवास र वितरण को क्षेत्र
हामी यसलाई पहाडी क्षेत्र, ज and्गल र नदीपारदेखि लिएर शहरी क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकारका आवासहरूमा फेला पार्न सक्छौं।
विभिन्न देशहरूमा (स्विट्जरल्याण्ड, बेल्जियम, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, लक्जमबर्ग, फ्रान्स र इबेरियन प्रायद्वीप)
उनीहरू के खान्छन्? खुवाउँदै
Anurans को अन्य प्रकार जस्तै तिनीहरूले माकुरा, आर्थ्रोपोड र साना कीराहरू, गँड्यौला, लार्भा, बीटलहरू, गँड्यौला, कीरा, आदि
तिनीहरू घरपालुवा जनावरहरू होइनन्। तर कहिलेकाँही पोखरीहरुबाट हामी सुक्ने क्रममा टेडपोलहरू बचत गर्दछौं। मलाई मन पर्छ कि केटीहरूले उनीहरूको ख्याल राख्छन् र परिवर्तनहरू अवलोकन गर्दछन्।
टेडपोल्स वा लार्भाले बोटबिरुवाको पदार्थ र क्यारियन खान्छन् जुन तिनीहरूले पानीमा पाउँछन्। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई अस्थायी रूपमा खान दिनुहुन्छ भने तपाईं यसलाई माछाको खानाको साथ गर्न सक्नुहुन्छ।
सेप्टेम्बर को पहिलो वर्षा पछि आउँछ एम्प्लेक्सस (जो अनुरन उभयचरको संभोग विधि हो)यो जमिनमा उत्पादन हुन्छ र ईगुइनल हो, विशेषताको साथ यो अण्डाहरू बोक्ने पुरुषहरू हुन्। भालेले पोथीलाई अण्डाको स्ट्रिंग छोड्न उत्साहित गर्दछ जुन नरले निषेचित गरिन्छ र उसको पछाडिको खुट्टामा हुर्कन्छ जहाँ उसले उनीहरूलाई १ महिनासम्म बोक्नेछ।
मँ अहिलेसम्म यसको फोटो लिन सक्दिन, मलाई आशा छ कि मँ एम्प्लेक्ससको राम्रा फोटोहरू छिट्टै पाउन सक्छु।
दाइ वा टोडका प्रजातिहरू
त्यहाँ मिन्टवाइफ टोडका species प्रजातिहरू छन्:
साधारण मिडवाइफ टोड (Alytes प्रसूति रोग)
इबेरियन मिडवाइफ टोस्ड (एलाइट्स सिस्टर्नासी)
Balearic दाई वा फेरेरेट टोड (Alytes muletenis)
बेटक मिड्वाइफ टोड (एलिट्स डिकहिल्लेनी)
माघ्रेब मिडवाइफ टोड (एलिट्स मौरस)
पहिलो स्पेन र भ्यालेन्सियामा पाउन सकिन्छ, केवल साधारण मिडवाइफ टोडको जीवन। त्यसकारण त्यहाँ कुनै प्रजातिहरूको बीचमा कुनै गडबडी छैन जब हामी एउटा पाउँछौं।
हिउँदमा भ्यागुता र टोडले के गर्छन् भन्ने बारे मैले सोच्दछु।
ठीक छ, toads र anurans bruman। ब्रुमेसन उभयचर र सरीसृपहरूको एक प्रकारको हाइबरनेसन हो। तिनीहरू पानीको मुनि सुस्त अवस्थामा रहन्छन्, यद्यपि उनीहरूले समय-समयमा खाने र पिउने काम जारी राख्नुपर्दछ। म यस लेखमा हाइबरनेसन र चोटको अधिक विवरणहरू छोड्दछु।
स्रोतहरू र सन्दर्भहरू
साझा विमान (डेलीचोन युबिकम)
कसरी स्विफ्ट, निगल र प्लेन बीचको भिन्नता बताउने
2 यसलाई कसरी पहिचान गर्ने
3 आवास र वितरण को क्षेत्र
4 उनीहरू के खान्छन्? खुवाउँदै
6 दाइ वा टोडका प्रजातिहरू
7 र जाडोमा?
8 स्रोतहरू र सन्दर्भहरू